အမျိုးသားများအတွက်အကောင်းဆုံးဟယ်လိုဝိတ်မိတ်ကပ် | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
အကယ်၍ ဒီနှစ်သင် latex မျက်နှာဖုံးများကိုလူတို့အတွက်ကြောက်စရာကောင်းသောဟယ်လိုဝိတ်မိတ်ကပ်ဖြင့်အစားထိုးလိုပါကဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားသင်ကမ်းလှမ်းသည် ၀ တ်စုံ ၀ တ်စုံတွင်ဘားကိုအမြင့်ဆုံးထားရန်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်များစွာရှိသည်.
မိတ်ကပ်သဘာ ၀ သည်အချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုများစွာလိုအပ်သော်လည်းအကျိုးရလဒ်မှာလည်းပိုမိုကြီးမားသည်။ ဒါပါ မျက်နှာ၏အရေပြားပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သောအခါတစ် ဦး ဝတ်စုံ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအမြဲပိုပြီးအထင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောသူများ။
1 အမျိုးသားများအတွက်ဟယ်လိုဝင်းမိတ်ကပ်: အဆိုပါဂန္ထဝင်
2 အမျိုးသားများအတွက်ဟယ်လိုဝင်းမိတ်ကပ် - ရုပ်ရှင်၊ စီးရီးနှင့်ရုပ်ပြများ
2.1 White က Walker က
ဂန္ထဝင်ဖုတ်ကောင်များ၊ သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်များနှင့် ဦး ခေါင်းခွံများသည်သင်၏ဟယ်လိုဝင်းမိတ်ကပ်အတွက်လုံခြုံသောအလောင်းအစားဖြစ်သည်။ အချို့သောအခြေအနေများတွင်အခက်အခဲများသည်အခြားသူများထက်ပိုမိုမြင့်မားသော်လည်းသင်ခန်းစာများအားနည်းနည်းချင်းစီသင်ကြားပေးခြင်းဖြင့်မည်သူမဆိုအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတများစွာမရှိသော်လည်းပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်နိုင်သည်။
ဖုတ်ကောင်မိတ်ကပ်လောင်းခြင်း၏အားသာချက်မှာ၎င်းတို့သည်အလွန်အားနည်းသောဝတ်စုံများဖြစ်သည်။ ဘာသာပြောင်းဝင်ချိန်တွင်သူတို့သည်မရေမတွက်နိုင်သောလုပ်ဆောင်မှုများစွာကိုလုပ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်များပြားလှသောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုကျင့်သုံးနိုင်ခြင်းကြောင့်သင်၏ဗီရို၌ကျန်ရှိသောဝတ်စုံများအတွက်သင်လိုအပ်သမျှရှိသည်။ ဤအခြေအနေသည်သင်၏တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ဟာသဉာဏ်ကိုပင်ထုတ်ဖော်ပြသသည်။
သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်မိတ်ကပ် တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်လူကြိုက်အများဆုံးအမျိုးသားဟယ်လိုဝင်းမိတ်ကပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရှည်လျားလွန်းခြင်းမရှိဘဲဖုတ်ကောင်များကဲ့သို့သင်၏မျက်နှာနှင့်ဗီရိုအတွင်း၌သင်၏ကိုယ်ပိုင်ထိတွေ့မှုကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ဤသဘောမျိုးဖြင့်သာမန်အ ၀ တ်အစားကိုခေတ်မီသော vibes များကိုထုတ်ယူရန်သင်၏ vampire အတွက်သားရေသားရေတုတ်ဖြင့်အစားထိုးရန်စဉ်းစားပါ။
ဦး ခေါင်းခွံများသည် Halloween တွင်ဘယ်သောအခါမှကျရှုံးမည်မဟုတ်ပါ။ ယင်း၏အောင်မြင်မှုသည်၎င်းသည်မိတ်ကပ်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်လူတိုင်းဤမျှနားလည်သဘောပေါက်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည် မည်သည့် tutorial မျိုးကိုမှမပါဘဲလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ ဦး ခေါင်းခွံမိတ်ကပ်ကိုတကယ့်ခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်စေလိုပါကဤအရာကိုလိုက်နာရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။
ဦး ခေါင်းခွံကိုဟယ်လိုဝင်းဝတ်စုံအဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းသည်သင့်အားတိကျသောအဝတ်အစားများမလိုအပ်သောအားသာချက်ရှိသည်။ သင်ပုံမှန်ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ် အရိုးစုဝတ်စုံဒါပေမဲ့ အနက်ရောင်အ ၀ တ်အစားများဖြင့်သင့်မျက်နှာကိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်အောင်ကူညီပေးနိုင်သည်.
အမျိုးသားများအတွက်ဟယ်လိုဝင်းမိတ်ကပ် - ရုပ်ရှင်၊ စီးရီးနှင့်ရုပ်ပြများ
ရုပ်ရှင်များ၊ စီးရီးများနှင့်ရုပ်ပြများသည်ဟယ်လိုဝင်းမိတ်ကပ်အတွက်မကုန်ခမ်းနိုင်သောအတွေးအခေါ်အရင်းအမြစ်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အလွန်မှတ်မိလောက်သောဇာတ်ကောင်များဖြစ်သောကြောင့်ဤနေရာတွင်သေးငယ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအထူးဂရုပြုရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်အခက်အခဲအဆင့်မြင့်တက်လာသည်။
ဗီရိုကိုဖြည့်စွက်ရန်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသော်လည်း၎င်းတို့အားလုံးသည်ယခင်အစီအစဉ်များထက်များစွာပိုမိုစီစဉ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒီအတွက်ကြောင့် သင်ဟာရလဒ်ကိုအပြစ်ကင်းစင်စေချင်ရင်နောက်ဆုံးမိနစ်မှာမထားနိုင်တဲ့ဝတ်စုံတွေပါ.
White က Walker က
အကယ်၍ သင်သည် 'Game of Thrones' စီးရီးကိုနှစ်သက်သူဖြစ်ပါကဤအဖြူရောင် Walker မိတ်ကပ်သင်ခန်းစာကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ ဆံပင်ကိုသူတို့ဖန်သားပြင်ပေါ်ပေါ်လာသောအခါအဆုံးသတ်ရပ်တည်နိုင်စွမ်းရှိသည်သောဤစိတ်ပျက်စရာရေခဲသတ္တဝါတစ် ဦး ဖြစ်လာရန်မည်မျှအတော်လေးလွယ်ကူသည်သင်အတော်လေးအံ့သြသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒီအဖြူ Walker ကမှုတ်သွင်းအခြားမိတ်ကပ်နှင့်မတူဘဲ, ၌ဤ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသောပရိုတင်းများသို့မဟုတ်အဆက်အသွယ်မှန်ဘီလူးများကိုမသုံးပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်မည်သူမဆိုအခြေခံမိတ်ကပ်ထုတ်ကုန်များဖြင့်အိမ်တွင်လက်တွေ့လုပ်နိုင်သည်။ ရလဒ်မှာပိုမိုရှုပ်ထွေးသောထုတ်ကုန်များနည်းတူအံ့သြစရာကောင်းသည်။
Joker ရဲ့စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကသူ့ကိုဂန္တ ၀ င်ဟယ်လိုဝင်းမိတ်ကပ်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။ ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းပြောင်းလဲမှုများအားလုံးကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ၄ င်းတို့တွင်တူညီသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာသင်ဆံပင်ပေါ်တွင်အစိမ်းရောင်ရေမှုန်ရေမွှားကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည် ဆံပင်တု.
ဒီအထင်ကရဇာတ်ကောင်ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ဗားရှင်းကတော့ 'Suicide Squad' ပါ။ Jared Leto's ဟာငါတို့သုံးခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့တော်တော်လေးကွဲပြားခြားနားတဲ့ Joker ပါ။ သူသည်သူ့ကိုယ်လုံးပေါ်ရွှေချည်နှောင်ခြင်း၊ တက်တူးများနှင့်သွားများကိုဖုံးထားခြင်းဖြစ်သည်။
သငျသညျရုပ်ပြအနေဖြင့် Joker ပိုနှစ်သက်လျှင်, ဒီအေးမြမိတ်ကပ်စဉ်းစားပါ။ ဒီလိုမိတ်ကပ်မျိုးဟာပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ ဒါပါ သင်၏မျက်နှာကိုလုံးဝပြောင်းလဲပစ်လိုက်ခြင်းဖြင့်သင့်ကိုမမှတ်မိအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်မတိုင်မီစမ်းသပ်မှုအချို့လိုအပ်သောတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Halloween ညသည်ပြီးပြည့်စုံသည်။ သို့သော်သင်မြင်သည့်အတိုင်းဆုကျေးဇူးသည်ကျိုးနပ်ပါသည်။
'Saw' ၏ထိတ်လန့်ဖွယ်ဇာတ်လမ်းတွင် 'Jigsaw' သည်ရုပ်ရှင်ရုံတွင်အလှည့်အပြောင်းအများဆုံးလူကြမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူတိုင်းလိုပဲဒီတစ်ခုမှာအလုပ်ရှိတယ် ဤအပိုင်းတွင်ပါဝင်သည့်မိတ်ကပ်သုံးမျိုးအနက်အရိုးရှင်းဆုံးဖြစ်သည်.
သင်အချိန်ပေးပြီးသင်လိုအပ်လျှင်၎င်းသည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည် သင်အလျင်အမြန်လုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်းတစ်ချိန်တည်းတွင်ကြောက်စရာကောင်းသောယောက်ျားများအတွက်ဟယ်လိုဝင်းမိတ်ကပ်ဖြစ်သည်။ ဗီရိုသည်သင်၏အနက်ရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်သကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။ အနီရောင်လည်စည်းနှင့်ပတ်သက်လျှင်သင်အိမ်တွင်ရှိနှင့်ပြီးသောပစ္စည်းများနှင့်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းသင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » လူတို့အဘို့ဟယ်လိုဝင်းမိတ်ကပ်
Prostatitis: အကြောင်းရင်းများ, ရောဂါရှာဖွေကုသမှုနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေး